Akụkọ - Shanghai Jianzhong na-akwado mgbochi na ịchịkwa ọrịa ahụ, na-agbakwunye usoro mmepụta ihe Enpak
Shanghai Jianzhong na-akwado mgbochi na njikwa ọrịa ahụ, na-agbakwunye akara mmepụta mkpuchi Enpak
Shanghai Jianzhong bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na mmepụta nke ngwaahịa njikwa ngwa ngwa. Mgbe anyị nwesịrị baptism nke okpueze ọhụụ ọhụrụ, agha na-enweghị egbe, ụlọ ọrụ anyị ewulitela nnukwu ihe eji emepụta nkpuchi, ihe nrụpụta nke Enpak brand masks ruru 50,000 kwa ụbọchị. Site na nwayọ nwayọ nwayọ nke mkpa anụ ụlọ, ụlọ ọrụ anyị agbasawanye azụmahịa ya na mba ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, enwere ụdị nkpuchi abụọ a na-ebupụ: ihe mkpuchi nhicha mkpofu na masks ịwa ahụ ọgwụ. Mba ndị a na-ebupụ mba karịrị 50 mba gụnyere Europe, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, na Middle East.
Anyị ụlọ ọrụ nwere a zuru ezu nkpuchi mmepụta omumuihe. Ihe omuma ihe omumu nke 100,000 na nke enweghi uzuzu na-agbaso ụkpụrụ omumuihe maka imepụta nkpuchi. Usoro mmeputa na-agbaso ISO13485: 2016 "Usoro Nlekọta Ngwaọrụ Ahụike Ahụike maka Iwu chọrọ". Isii isi usoro na-eme ka nje nwere ike iri uru nke: 1. Plastic imi warara, mma dabara imi; 2. dabara ọdịdị ihu, nye mma adhesion; 3. Ocha di elu na-agbanwe akwa nti, na-adi nma ma ghara isi ike; 4. Electret ọgwụgwọ, melite nzacha mmetụta, mma ikuku permeability; 5. Superfine eriri anụ-enyi na enyi ihe, nwayọọ na-abụghị mgbakasị; 6. Enweghị nkebi edging, mara mma na-emesapụ aka.
Companylọ ọrụ anyị nwere ntozu mbupụ zuru oke yana nnweta dị mma. E tinyekwara asambodo European CE, ihe mkpuchi ịwa ahụ ọgwụ na ndepụta ọcha nke Ministry of Export Commerce. Ihe nkpuchi nkpuchi ọ bụla nwere akwụkwọ asambodo nke ụlọ ọrụ nyocha: akụkọ nyocha nke TUV South German Asambodo na ule na-ezute nke na-ezute EN14683 EU nwere ike ịwa ahụ ịgwọ ọrịa; ule PONY Puni nyere nyocha filtration nke 99%, na ihe ndị na-egbochi iku ume iku ume na-agbaso akụkọ GB T 32610 -2016 Test nke nkọwapụta mkpuchi teknụzụ kwa ụbọchị. Companylọ ọrụ anyị nwere ikike nrụpụta siri ike, nnyefe oge, yana ọkwa kredit nke A ruo ọtụtụ afọ. Ọ bụ ụlọ ọrụ nwere nkwado ogologo oge.
N’ụzọ, anyị n’ekele. Enwere m ekele maka nkwado na enyemaka nke ndị isi na ọkwa niile. Ọrịa ahụ ga-emesị gafee. Mụrụ anya n'oge udo na ịdị ike bụ ndụ ụlọ ọrụ ga-adịte aka. N'ime, anyị na-agbanwe usoro njikwa, guzobe usoro ihe ọhụụ zuru ezu nke oge a, mee ka nkà na ụzụ ọhụrụ dị ngwa, ma welie isi ịsọ mpi nke ngwaahịa; n'èzí, anyị na-agba mbọ imebi monopolies na teknụzụ mba ọzọ na teknụzụ azụmaahịa, ma bulie aha mba na ugwu nke ụdị mba N'ihi nke a, enwere m olile anya mkpuchi mkpuchi Enpak na-ere ọfụma n'ụwa niile.